Fampisehoana Poster LED ivelany China Manufacturer
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Led Digital Billboard,Advertising dokam-barotra elektronika,Ny efijery Led Poster
Home > Products > Led Kiosk Poster > Famoahana vita amin&#39;ny gorodona ivelany > Fampisehoana Poster LED ivelany
Fampisehoana Poster LED ivelany
Tsy miankina amin'ny tranobe hafa ny vata fanamainam-piraharahana LED miendrika boaty mena ary miorina amin'ny toerana tsy miankina.Manao am-boalohany amin'ny fananganana lalam-barotra miroborobo, eo anoloan'ireo toeram-pivarotana lehibe, ny tobin'ny fiara fitateram-bahoaka sy ny toerana hafa.It dia miankina amin'ny tontolon'ny fametrahana.Ity karazana dokambarotra dokam-barotra Io faritra io dia tsy lehibe, ary ambanin'ny 5 metatra metatra toradroa.
Focus Media, izay nanomboka tamin'ny fananganana dokambarotra LCD, dia niditra tao amin'ny sehatry ny dokam-barotra ivelany ivelany hatramin'ny 2006. Izy io dia nanangana fitaovana fanakonana loko LED ivelany ivelany any Shanghai, ary tsy maintsy manamboatra efijery miloko LED any ivelany, Beijing, Guangzhou ary hafa. toerana. Network Hookup.
Fa maninona no misy ny takelaka efijery ivelany na Double Sided Outdoor Led Poster izay tena malaza amin'izao fotoana izao.
Mampitaha amin'ny milina LCD, ny fampisehoana Led dia manana tombony toy ny fahatokisana avo kokoa, fanamainana sary tsara; Zoro fijerena mivelatra; Haavo ambonimbony avo kokoa: vahaolana ara-toekarena sy ara-drariny.
Ary miaraka amin'ireo toetra mampita marobe mifangaro , Priva Exterior Media Player dia mora amin'ny fiantraikany amin'ny faritra iray toa ny manodidina ny lalana, ny lalana an-dalambe, ny arabe ary ny zaridaina lohahevitra. Alao sary an-tsaina fa am-polony na efijery an-jatony ny efijery an- trano any amin'ny faritra iray, miaraka amin'ny teknolojia tambajotra, ireo dokambarotra ivelany ivelany ivelany ireo dia maneho ny dokam-barotra mitovy amin'izany. Manao ahoana ny halehiben'ny fiantraikan'ny maso ho an'ny mpanjifa na ny mpanjifa mety ho mpanjifa. Ary koa ny halalin'ny fahatsiarovan'izy ireo ny ad.so io vokatra io dia tsy latsaky ny doka ivelany ivelany ary ny dokambarotra Led lehibe .
LED anarana anarana: joro P6 mitsangana Outdoor LED efijery sary
Kilasy LED: SMD2727
Haben'ny kabinetra: 78 '', 89 '', 112 '' Azo alaina (misy koa ny habeny natao)
Isan'ny safidy 78 '', 89 '' ary 112 ''. IP65 / 54, porofo amin'ny toetr'andro; Fampisehoana ivelany HD HD ivelany, sary mazava sy mazava;
Famirapiratra sy fanitsiana auto araka ny tontolo iainana; Ny fitantanana vondrona manan-tsaina, mora sy malefaka
Famolavolana mitambatra, mora ampiasaina
Mpanodina fanidiana ao anatiny, plug-in hampiasaina; Na ny rihana roa sy finday azo alaina , mora ny mitondra sy mametraka.
Ny fitantanana manan-tsaina sy ny fifehezana sy fitantanana kluster lehibe. mora sy malefaka
Mitantana fampisehoana marobe amin'ny alàlan'ny tariby, 3G, 4G, WAN ary LAN; Afaka mitantana amin'ny telefaona finday miaraka amin'ny APP. 1-1 sy fitantanana 1-N Iray tsindrio iray hanala, fotoana, hanavaozana ny AD .
Ny fanaraha-maso mailaka sy GPS
Ny fanaraha-maso manan-tsaina sy GPS dia manampy amin'ny fiarovana ny fampisehoana amin'ny famotehana sy fitantanana ireo mari-pahaizana an-tsary rehefa lehibe ny habetsahany.
Famirapiratra avo sy famonjena angovo
Ny takelaka efijery ivelany dia manana hazavana avo hatramin'ny 7000nits.
Ny tara-pahazavana dia mety hanitsy araka ny hazavana tontolo iainana . Ny familiana Timer dia afaka manampy amin'ny angovo angovo ihany koa.
Plug sy milalao, asa mora
Mifoka, ny hamandoana, mahamarika ny mari-pana
Community, mandeha an-dalambe, zaridaina lohahevitra, Kiosk, sekoly, hopitaly, zaridaina, toeram-pivarotana, parking, gara, metro, hotely, gara, fiara 4s , mahasarika fizahan-tany , gara sns.
Product Categories : Led Kiosk Poster > Famoahana vita amin'ny gorodona ivelany
P5 LED afisy ivelany
P6 LED afisy
Ny sary afovoan'ny mpitarika ivelany
Ny taratasim-pamoahana an-dalambe no taratra
poster poster ivelany
Aseho Poster LED ho an'ny ivelany
Aseho Poster LED ho an'ny anatiny
Advertising dokam-barotra elektronika
Ny efijery Led Poster